Emphilweni zonke umsubathi kuza isikhathi lapho isidumbu sakhe safinyelela ukuthuthukiswa iphezulu kakhulu, unikezwa izinsiza ukuthi unakho. Uma ufuna ukuya phambili, ke kudingeka makeup ngaphezulu emzimbeni.
Ezemidlalo umsoco kungasiza isinyathelo osithathayo okwengeziwe, njengoba uzokwazi ukwandisa ukusetshenziswa kwabo amaprotheni, ama-carbohydrate, amavithamini namaminerali.
Kufanele uzame imikhiqizo kusukela Optimum Nutrition, uma ufuna ukuthuthukisa imiphumela yakho sawo esiningi ngokushesha ngaphandle kokudala yimuphi ukulinyazwa emzimbeni.
Kungani ngidinga amaprotheni okunyakazisa?
Amaphrotheni - Amaphrotheni kuyinto. Wonke umuntu uyazi ukuthi yalolu ketshezi kuyinto ngeziningi zezinto zokwakha, okuyilona elidingekayo ukuze umuntu umzimba ukwakha kwemisipha izicubu. Ngo inqubo ukuqeqeshwa lokhu Indwangu iza laphinde labhidlika - imicu seziklebhukile sendlala.
Ngemva Amazing in the gym, umzimba uzama ukubuyisela wabhubhisa kwemisipha izicubu, kanye ukwakha ezinye, ngakho ngokuzayo ukumelana kangcono imithwalo ukuthi uthola ngesikhathi umsebenzi.
Lezi "izitini", lapho umzimba ukulamula izimbobo nokwakha kabusha izibuya entsha, futhi amaprotheni molecule.
Amaphrotheni kusukela inyama ngezinye izikhathi bantule ngoba imisipha ukukhula
Yiqiniso, amaprotheni ingatholakala kuphela ezemidlalo umsoco. Edingekayo acid acid yokwakheka amaprotheni kuyinto okungcono inyama. Futhi Wabasaqalayo ubani ukuqeqesha ehholo ezingaphansi kwezinyanga eziyisithupha, lokhu kufanele ngempela ngokwanele.
Kodwa uma uzibekela umgomo wokuba abe omkhulu futhi onamandla, ukuze nokukwazisa abadlulayo, khona-ke nje ngeke akwenze ngaphandle ezemidlalo umsoco, isibonelo, kusukela Optimum Nutrition. Phela, kuza isikhashana yokujama tsi ekukhuleni yemisipha. Bona kwenzeke ikakhulukazi ngenxa habituation yomzimba ukucindezeleka, nokungalali futhi zinikezwe uma kukhona ekudleni.
Optimum Nutrion wathola ithuluzi ngokushesha ukuletha emzimbeni nge lemali edingekile of amaprotheni. Ngenxa iprotheni nokuphathelene kusukela ezivuma cocktail kwelinye ingxenye ku umzimba wakho uthola 40-50 amagremu high amaprotheni.
Ngaphezu kwalokho, kuyazuzisa ethi iprotheni, lokhu inkampani unezela ejenti akhethekile enzyme ukuthi uvumele ukudiliva nokuthulula ukumuncwa okuphelele umzimba. Lokhu akusho ona yemvelo inqubo umzimba.
Amaphrotheni Optimum Nutrition kufanelekile kokubili emzimbeni omiswe, futhi ekwakheni yemisipha entsha. Uma umgomo wakho - ukulondoloza imiphumela zamanje, kuzoba ngokwanele ukuthatha cishe 1 igremu inhlanganisela ngamunye 1 kg isisindo emini. Futhi uma ufuna ukusiza umzimba ukwakha imisipha, kufanele kuthathe 2 amagremu per 1 kg isisindo emzimbeni wakho phakathi nenkathi efanayo.
Lo mkhiqizo kusuka Optimum Nutrition is best ethathwe izinsuku ukuqeqeshwa, ukulungiselela siqu cocktail yakho ezimbili: 1 isikhathi emini phakathi ukudla futhi 1 izikhathi ngokushesha ngemva kokuzivivinya.
Ngalezo zinsuku, uma kungekho ukuqeqeshwa, kubalulekile ukusebenzisa amaprotheni izikhathi 1 usuku lonke. Njengoba sazi ukuthi inkampani wakwazi ukufeza wokuqukethwe lelisetulu amaprotheni okumsulwa ingxube (80%), lokho kuyinto enhle kakhulu ngenxa yokwanda ijubane yokutakula kwemisipha.
Ungesabi ukuba ezinganembile e izibalo - iprotheni enjalo ayinakho impahla zibekwe okunamafutha kwezicubu. Okungukuthi, ngisho noma idlule umthamo, isisindo esengeziwe awufiki.
Kungani gainer Optimum Nutrition?
Gainer yakhelwe ukwandisa isisindo emzimbeni. Uma une Yakha mncane, akukho ukuthambekela akhuluphele, kanye kokudla, bese lo mkhiqizo ngawe kwangigcina.
Ukudiliva umzimba carbs ngokwanele, uzobe udovletvoryatego ngokugcwele imfuneko indaba for ukukhiqizwa energy, okusho ukuthi akukho lutho olungavimba ukukhula kwemisipha izicubu.
Uma sibukeke enjalo uthatha amaprotheni Optimum Nutrition, umphumela uba e isisindo isethi ziyoba zimbi, kusukela ukuntula carbohydrate umzimba uzofuna esikhundleni amaprotheni alo-molecule. Lokho indaba isetshenziselwa ukwakha imisipha, izosetshenziswa njengoba umthombo energy.
Gainer Luhle ukukusiza ukuvala iwindi carbohydrate, okudingeka ukwenze imizuzu engu-40 ngemva Amazing.
Indlela yokusebenzisa gainer?
Wena wathenga gainer ngu Optimum Nutrition. Indlela? Kufanele kuqondwe ukuthi ezimele 1 ingxenye esisindo inani, kodwa umakhi incoma ukuthi zithobele lokhu okulandelayo: a isisindo afinyelela ku-80 kg ngokwanele 1 yokulinganisa spoon izikhathi 3 ngosuku, futhi u-100 kg - kufanele baphuze mayelana akhe kwesigamu esilinganayo isikhathi.
Kulabo abane isisindo idlula lezi nemingcele, kubhekwa elanele libe linye ukuze ungeze ezimbili akhe futhi izikhathi 3 ngosuku.
Yini inkampani Optimum Nutrition Izibuyekezo?
Imikhiqizo yale nkampani abasakwazi kusandile e-US kanye eRussia. Ngenxa yokuthi ukuthandwa kuphezulu, intengo kuyafaneleka, kodwa kukhona futhi inkohliso ezemidlalo umsoco.
Ngakho-ke, thenga lokhu noma ukuthi umkhiqizo kuyadingeka kuphela ezitolo ezicwaningiwe futhi eqinisekisiwe. Kungenjalo, nje abazi ukuthi yini uzokwiza azokuthatha kude - sikhuntile wokulinganisa noma inhlanganisela kukusiza ukuba zikhule kahle.
Uma unquma ukwenza iprotheni noma isiphuzo carbohydrate, khona-ke ungakwazi ngokuphepha balungiselelwe ubisi noma ijusi elimnandi. Glucose kuyothuthukisa umzimba wakho ukwenza ukukhululwa kwe-insulin, okuyinto vele eminye kanye iketanga, uyisa izakhi zawo wonke umzimba.
Gxila izinga lokugayeka kokudla emzimbeni
I imithamo ngenhla ngesimo, ngoba konke kuncike Ukuklanywa komzimba womuntu. Ngakho ungesabi ukuba ulinge futhi uzame ukwenza izinto ezintsha.
Uma uqonda ukuthi ukuze usethe mass nawe ngokwanele 0.5 yokulinganisa spoon izikhathi 2 ngosuku, ungakwazi nakalula cocktail akho ngokunembile ngenxa yaleli umthamo.
BCAA - lokho? Funda ukuthi BCAA (BTSAA)
Kanjani ukwakha biceps ekhaya ngesikhathi esifushane?
Isitshalo seqanda. Izifo nezinambuzane
Ukuphuza Ukudla izinsuku ezingu-7: ukubuyekezwa, amamenyu kanye nemiphumela
Yini esikhundleni soda? izincomo
Snowberry: zokutshala kanye nokugcinwa, incazelo nokukhiqizwa
Ukuphathwa nge Izinhloso: Highlights
"Dallmayr" ikhofi: ukubuyekezwa. Coffee Dallmayr Prodomo